Ammaanka ilmaha | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / In waalid la ahaado / Ammaanka ilmaha
Laba carruur yar yar oo xiran koofiyadaha baaskiilka oo ag taagan baaskiilka dadka waaweyn. Carruurtan waxay xiranyihiin dharka xagaaga oo xagga dambe waxaa ka muuqda dhir cagaaran.
Guddiga warbaahinta ee xukuumadda ayaa soo saaray dukumiinti kugu caawinaya in aad si wanaagsan u taageertid.
Dukumiintiga oo loo turjumay luqado badan oo kala duwan waxaa laga akhrisan karaa barta intarneetka ee Guddiga warbaahinta ee xukuumadda.
Hey'adda badbaadada iyo diyaargareynta, MSB, waxaa ay soo saartay laba filin oo tilmaamamaya sida soo sameynayo wadno- iyo sambabo badbaadin.